ယူနိုက်တက်မန်နေဂျာသစ် အဖြစ် ရန်းနစ်ရဲ့ နေရာကို အစား၀င်လာစေချင်တဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် နည်းပြ ၂ ဦးကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ပေါလ်စခိုးလ် - xyznews.co
ယူနိုက်တက်မန်နေဂျာသစ် အဖြစ် ရန်းနစ်ရဲ့ နေရာကို အစား၀င်လာစေချင်တဲ့ သူ့စိတ်ကြိုက် နည်းပြ ၂ ဦးကို ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ ပေါလ်စခိုးလ်
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နို၀င်ဘာလတုန်းက ရပ်ဖ်ရန်းနစ်ကို ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတဲ့ အိုလီဂန်နာဆိုးရှားရဲ့ နေရာမှာ ယာယီနည်းပြ အဖြစ် ရာသီကုန်ထိ အစားထိုး ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက် ဘက်ကတော့ ရန်းနစ်ဟာ နွေရာသီမှာ အသင်းရဲ့ အကြံပေး ရာထူးကို ၂ နှစ်တာ ရယူသွားလိမ့်မယ်လို့ ဆိုထားပေမယ့် ဂျာမန်နည်းပြ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အသင်းကို ကောင်းစွာ ကိုင်တွယ် နို်င်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အမြဲတမ်း နည်းပြ အဖြစ် တာ၀န်ယူချင်တဲ့ သူ့ရဲ့ ဆန္ဒကို ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ဖော်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ရန်းနစ်ရဲ့ လက်အောက်မှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ကစားပုံဟာ တိုးတက်မှု မရှိ ဖြစ်နေပြီး ယခုလ အစောပိုင်းက ဝုဖ်ကို အိမ်ကွင်းမှာ အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီး ရန်းနစ်ရဲ့ လက်ထက် ပထမဦးဆုံး ရှုံးပွဲ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂလာနေ့က ဗီလာကို ၁-၀ နဲ့ နိုင်ခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလား ပွဲစဉ်မှာလည်း ပြိုင်ဘက်ကို ခြေစွမ်း အသာစီး မရခဲ့ဘဲ ခက်ခဲစွာ အနိုင်ရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
စခိုးလ်ကတော့ မန်နေဂျာ တစ်ဦး အနေနဲ့ ဆုဖလား အနည်းငယ်သာ ရထားခဲ့တဲ့ ရန်းနစ်ကို ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ အပေါ် မေးခွန်းထုတ်သွားခဲ့ပြီး သူ့အနေနဲ့ ရာသီကုန်မှာ ပီအက်ဂျီ နည်းပြ မာရီစီယိုပိုချက်တီနို ဒါမှမဟုတ် စပါးနည်းပြ အန်တိုနီယိုကွန်တီ ကို အလို ရှိတယ်လို့ ထုတ်ဖော် သွားပါတယ်။ မန်ယူနိုက်တက်ဟာ ဆိုးရှား ရလဒ်တွေ ဆိုးနေစဉ် ကွန်တီကို နည်းပြအဖြစ် ခန့်အပ်လို့ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး ရခဲ့ပေမယ့်လည်း အသင်းရဲ့ တာ၀န်ရှိသူတွေက ဒီအခွင့်အရေးကို အသုံးမချခဲ့တာကြောင့် အင်တာ နည်းပြဟောင်းဟာ စပါးကို ရောက်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုချက်တီနို ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်တွေကတည်းက မန်ယူနိုက်တက်နဲ့ သတင်းတွေ တောက်လျှောက် ထွက်ပေါ်နေခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ ပီအက်ဂျီ နဲ့ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတာကြောင့် လာမည့် နွေရာသီမှာ ဒီရာထူး အတွက် အထူး ရေပန်းစားသူ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်းနစ်ရဲ့ နေရာမှာ ဘယ်သူ့ကို အစားထိုးသွားချင်သလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို စခိုးလ်က “တော့တင်ဟမ် က ကွန်တီ ဒါမှမဟုတ် ပိုချက်တီနို ပါပဲ။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒီနည်းပြ ၂ ဦး ထဲက တစ်ဦးကို အလိုရှိပါတယ်။ ကွန်တီဟာ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ယာဂန်ကလော့ သောမတ်တူချယ် တို့နဲ့ တစ်တန်းတည်း ရှိနေတာကို ကျွန်တော်တို့ သိထားပြီးသားပါ။ သူဟာ ရောက်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မန်ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ ဒီလိုနည်းပြမျိုးကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောတာကို တော့တင်ဟမ် ပရိတ်သတ်တွေ နှစ်သက်မှာ မဟုတ်ပေမယ့် နွေရာသီမှာ ယူနိုက်တက်တို့ သူ့ကို ခန့်အပ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိနေပါတယ်။
ကွန်တီဟာ လက်ရှိမှာ စပါး ကစားသမားတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်မကျေမနပ် ဖြစ်နေတာကို ခင်ဗျားတို့ မြင်နေရမှာပါ။ သူ အခြား အရာတွေ လိုချင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ကွန်တီဟာ ယူနိုက်တက်မှာ စပယ်ရှယ် အရာတွေ လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူ့မှာ ဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ သူ့ကို ခေါ်ယူနိုင်မလား? ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။
ပိုချက်တီနို ကလည်း အရမ်းကောင်းတဲ့ မန်နေဂျာလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ တော့တင်ဟမ်မှာ လုပ်ပြခဲ့တာတွေကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ပီအက်ဂျီမှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိရသေးပါဘူး။ သူဟာ ထိပ်တန်း မန်နေဂျာ တစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း အဲဒီမှာ သက်သေပြနိုင်မလား ဆိုတာ စောင့်ကြည့်သွားရတာပေါ့။ သူ့အနေနဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ သက်သေပြဖို့တော့ လိုနေသေးတယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့ အ၇ည်အသွေးတွေ ရှိနေပါတယ်။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ရန်းနစ်ကို ခန့်အပ်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး စခိုးလ်က “ကျွန်တော်ကတော့ မန်ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ ဒီလို အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေ အတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးလူကို ခန့်အပ်ရမှာပါ။ အရေးကြီးဆုံး နေရာဟာ မန်နေဂျာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဥရောပမှာ နာမည်တစ်လုံး ရှိနေတဲ့ သူကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဟာ နည်းပြတစ်ဦး အနေနဲ့တော့ ကြီးကြီးမားမား အောင်မြင်မှု မရခဲ့ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့အကြီးကြယ်ဆုံး ကလပ်က သူ့ကို ဆက်သွယ်လာချိန်မှာ သူ့အနေနဲ့ ဒါကို ငြင်းဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး နည်းပြ ၅ ဦးထဲမှာ ပါ၀င်နေတဲ့သူကိုပဲ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ဒါမျိုး မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီခန့်အပ်မှု အပေါ် အံ့အားသင့်မိပါတယ်။”
Previous Article အဖွင့်ပွဲရှုံးတဲ့ အီဂျစ် ၊ နယူးကာဆယ် ရဲ့ တိုက်စစ်မှူးသစ် ၊ ထရာအိုရေး အတွက် စပါးနဲ့ ပြိုင်မယ့် ချဲလ်ဆီး တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
Next Article ငွေ အားကိုး နဲ့ ညှစ်ကွက်တွေ ထုတ်သုံးလာတဲ့ နယူးကာဆယ်